सबै महिलाले अनिवार्य जान्नै पर्ने, महिनावारीका यस्ता भ्रम | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य सबै महिलाले अनिवार्य जान्नै पर्ने, महिनावारीका यस्ता भ्रम
सबै महिलाले अनिवार्य जान्नै पर्ने, महिनावारीका यस्ता भ्रम
१. महिनावारीको समयमा शरिर कमजोर हुने गर्दछ
३. सेक्ससँग बच्नुहोस्
४. व्यायाम गर्नु हुँदैन
६. गर्भवती हुनसक्नुहुन्छ
७ . मन लागेको जे पनि खान सक्नुहुन्छ
Previous articleहराएको श्रीमति खोज्दै बेलबहादुर(भिडियो)
Next articleबिहानै तातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खाँदा हुन्छन् यस्ता फाइदा